hubinta tayada - Shiinaha Anrui Holding Co. Group, Ltd
Waxaan xakameeyo tayada saa'idka 'ka steel, dayactir, daaweynta kulaylka, shiidi doona, shirka in alaabta la dhammeeyayna ku saabsan habka buuxa. Ka sokow in aan isticmaali qoondeeyey wax cayriin.
1: Sanbal baadho wax cayriin,
2: geeddi-socodka Full baadho oo ildheer qaybo. ;
3: Si buuxda u baaraan raceway of jeestay qaybo ;
4: Si buuxda u baaraan aragti muuqaalka jeestay qaybo ;
5: daaweynta Heat in-geedi socodka kormeerka by Dufcaddii ;
6: Si buuxda u baaraan shiidi aragti in-geedi socodka;
7: Si buuxda u baaraan raceway super-dhammeeyayna;
8: Sanbal baadho kubadaha steel, baqashada, shaabadihiisa, dufan by Dufcaddii ;
9: Si buuxda u baaraan aragti ka hor shirka;
10: Si buuxda u baaraan ansixin, qaylada alaabta ku dhameysatay ee geedi socodka;
11: Sanbal baaraan waxyaabaha dhamaystirtay warehouse- baxay by Dufcaddii .;
12: darane qaboojinta Continuous iyo nadiifinta ultrasonic on habka buuxa :( sampl kormeerka nayaa)